Kitra – Fifidianana ho filohan’ny Caf: ho sarotra ny haha kandidà an’i Ahmad | NewsMada
Kitra – Fifidianana ho filohan’ny Caf: ho sarotra ny haha kandidà an’i Ahmad
Par Taratra sur 04/03/2021
Mbola eo am-piandrasana ny valin’ny fanadihadiana, mahakasika ny fitorian’i Ahmad ny federasiona iraisam-pirenena baolina kitra (Fifa), any amin’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanatanjahantena (TAS), ny rehetra amin’izao fotoana izao.
Ny talata 2 sy omaly alarobia 3 marsa no nohenoina sy nanaovana fanadihadiana teo anivon’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanatanjahantena (TAS), i Ahmad filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf). Andrasana izay ho valin’izany na hanome rariny na hitsipaka azy ny TAS.
Ho sarotra ny haha kandidà an’i Ahmad, araka ny fanadihadian’ireo mpanara-baovao. Na hahazo fahafahana aza, ity filohan’ny Caf ity, ho sahirana satria tsy maintsy mbola hametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina any amin’ny komisiona fanaraha-mason’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), izay hanamarina sy handinika indray izany. Tsy ho vita ao anatin’ny fotoana fohy anefa izany fa haharitra eo amin’ny herinandro farafahaingana. Raha ho afaka hilatsaka izy, tsy hisy intsony ny fotoana hanaovany fampielezan-kevitra. Ny fotoana mihitsy izany no sakana ho an’i Ahmad, amin’ity.
Raha tsy mahazo rariny izy, dia hihatra aminy ny sazy 5 taona tsy mahazo misahana baolina kitra sy ny fandoavana lamandy, 185.000 Euros na 832.500.000 Ar.
Tsiahivina fa hotontosaina ny 12 marsa ho avy izao, any Rabat Maraoka ny fifidianana izay ho filohan’ny Caf. Hatreto aloha, kandidà efatra mirahalahy no efa neken’ny Fifa, hilatsaka dia ilay Afrikanina tatsimo, i Patrice Motsepe, ilay Senegaley, i Augustin Senghor, ilay Ivoarianina, i Jacques Anouma ary ilay Maoritanianina, i Ahmed Yahya.